Ministry yezvekutakura uye Zvivakwa yakatendera Çiğli Tram Line Project. Mushure mekunge chirongwa ichi chakabvumidzwa neMutungamiri, iyo nyoro yekuvaka uye yekuvaka ichatanga. Nhanho imwechete mu İzmir Metropolitan Municipality Çiğli Tram Line Project [More ...]
Inoshanda pamitsara yetram, ine nzvimbo yakakosha mukufambisa mumaguta muEskişehir, enderera. Chiteshi cheBhasi-Opera-Kumlubel uye [More ...]
VaSamsun Metropolitan Meya Mustafa Demir vakazivisa kuti tram yacho ichave yakasununguka pakati pegumi nemana - 13.30, kuitira vateveri kuenda kuYılport Samsunspor - Amed Sportive Activities mutambo, uyo uchatambwa na10.00: 16.30 mangwana. President Mustafa [More ...]
Achivavarira kupa hunhu hwekufambisa kunevanhu veSamsun, SAMULAŞ A.Ş. akanyoresa kunaka kwayo nemagwaro aakagamuchira. "Chinangwa chedu ndechekufambisa kwemhando yepamusoro," akadaro Enver Sedat Tamgacı, General Manager, akagamuchira "Integrated Management System Certification". Mukati merimugadziriro yemasangano emakambani nemirairo yepamutemo [More ...]
Konya Metropolitan Meya Uğur İbrahim Altay, pamwe naMay Karatay Meya Hasan Kılca uye Provincial Health Manager Mehmet Koç, vakaita ongororo muKonya City Hospital, iyo ichatanga kushanda munguva pfupi. [More ...]
Antalya Metropolitan Municipality iri kuronga 'Antalya Transportation Workshop' kuunza mhinduro dzisingagumi uye dzakagadzikana kumatambudziko ekufambisa emadhorobha. Vese vatori vechikamu kuti vagadzire mhinduro dzakajairika-dzakanyatsogadzirirwa kune yekufambisa kwaAntalya inoda Kukadzi 19 [More ...]
Bursa Transportation Public Transportation Management (BURULAŞ) basa rekufambisa kweBursa Metropolitan Municipality. BursaRay inopa Bursa mafuta ekufambisa neBurTram uye mabhazi manejimendi. Ku Bursa yeruzhinji yekufambisa iyo ichave yakakodzera kwe2020 [More ...]
Mutsetse weti tram wekuwedzera kuChipatara cheguta muKocaeli Metropolitan Assembly wakaitwa muzvirongwa. Ministry of Transport iri kutarisirwa kunanzva mutsetse uyu kusvika May Kocaeli Metropolitan Municipality munaFebruary musangano weLeyla Atakan Cultural Center [More ...]
Mukati mechikamu cheAntalya Metropolitan Municipality 3rd Stage Rail System Project, iyo Meltem yekufamba-famba yakanyanyisa kubviswa, iyo yaidzivirira nzira yemabiraki jinji inoshanda. Kuverengera nzira yakachengeteka yevanofamba netsoka kuenda kuAydeniz University [More ...]
Little Kindergarten Akatumira Hondo yeguta neAkçaray
TransportationPark, inotsigirwa neKocaeli Metropolitan Municipality, inopa mafambiro ezviuru zvevagari zuva rega rega, inobatawo vashanyi vayo mukati mekuyera kwerwendo rwavanoronga. Mumaonero aya, makumi matatu evaperekedzi vevadzidzi ndivo vashanyi veGeneral Directorate yeTravelation Park neAkçaray. [More ...]
Basa rakamira paEminönü Alibeyköy Tram Line?
Zvinonzi mabasa asvika pakamira muEminönü-Alibeyköy Tram Line, iyo yakatanga kubva mudunhu reEminönü ndokutanga nemahombekombe eUcyç ndokutanga kusvika paAlbeyköy Cep Bus Station kubva kuAlbeyköy pakati uye ichida kupedziswa muhafu yechipiri ya2020. [More ...]
Mhemberero yeKaraköy Tunel 145, 106th Annivers of Nostalgic Tram
Yegumi nemana zuva rekuzvarwa kwaKaraköy Tunnel, yechipiri pasi penyika, uye yegumi nematano yekuzvarwa kwaNostalgic Tram, isingakoshi yeIstiklal Street, yakapembererwa. Sangano rekongiresi rakaronga kuti riitwe muchirongwa ichi rakadzimwa nekuda kwenyaya yevakafira kubva kuIdlib. Beyoglu [More ...]
Meya Yüce ari muBursa kuSakarya Tram Project
Kuongorora mashandiro ejanji uye maturakiti emabasa muBursa uye kusangana neBursa Metropolitan Municipality Meya Alinur Aktaş, Mutungamiri Ekrem Yüce vakati, "Iwo mashoma njanji matambiro atinoda kuziva muguta redu ndiwo akakosha kwazvo kushanya kwedu kweBursa tram. [More ...]